घरमा मनिप्लान्ट लगाउँदा भुलेरपनि नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती, नत्र कं`गाल बनिएला ! - Info Nepal
INFONPLकला/सस्कृतघरमा मनिप्लान्ट लगाउँदा भुलेरपनि नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती, नत्र कं`गाल बनिएला !
घरमा मनिप्लान्ट लगाउँदा भुलेरपनि नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती, नत्र कं`गाल बनिएला ! घरको वास्तु दो- ष भगाउनको लागि हाम्रो धर्म शास्त्रहरुमा अनेकौँ उपायहरु बताइएका छन् ।
वास्तुशास्त्रका अनुसार अनेक किसिमका रुख बिरुवा लगाउदा घरको नकारारात्मक उर्जा हटाउनमा मद्दत मिल्दछ । वास्तुशास्त्रमा बोट बिरुवा लगाउने एउटा निश्चित दिशा हुने गर्दछ, यदि बोटबिरुवा सहि दिशामा लगाउन सक्यो भने घरमा सुख शान्ति र समृद्धि भई रहनेछ ।
तर गलत दिशामा लगाइयो भने यसको ज्यादै ठुलो नोक्सान पनि हुन सक्दछ । मनी प्लान्टको बिरुवा घरको कुन दिशामा लगाउने र कुन दिशामा नलगाउने त जान्नुहाेस्:-
वास्तुशास्त्रका अनुसार घरमा मनि प्लान्टको बिरुवा उत्तर-पूर्व दिशामा राख्नु हुदैन जसले गर्दा घरमा सम्पन्नाता टाडा भाग्ने र घर परिवारमा सधै कलह झगडा भईरहने हुन्छ खटपट पैदा भईरहन्छ । मनी प्लान्ट लगाउने समयमा यो कुरामा ध्यान दिनुस कि कहिल्यै पनि यसको पता सुक्न नपाओस, समय-समयमा पानी अवस्य हाल्नुपर्दछ ।
मनी प्लान्टको बिरुवा घरको बाहिरभन्दा घर भित्र लगाउनु शुभ मानिन्छ । घरको भित्र मनी प्लांटको बिरुवा गमला अथवा काचको बोतलमा लगाउन सकिन्छ । मनि प्लान्टको लहरलाई जमिनमा फैलाउनुभन्दा कुनै दिवारको सहारा दिएर माथि अझै उभो चडाउनुपर्छ । यदि यसको लहर जमिनमा फैलियो भने धन प्राप्ति हुनुको सट्टा उल्टै पैसा सम्पतिको नोक्सान हुनेछ ।
सोह्र श्राद्धको अवधिमा भुलेर पनि नगर्नु यी कार्य नत्र पितृदोष लाग्छ !